Teknika hanatsarana ny fianarana: Iza no tena mandaitra? Fizarana 2 | Fiofanana kognitive
Araka ny tondroin'ny lohatenin'ny lahatsoratra dia efa nanokana ny tenanay tamin'ity lohahevitra ity izahay, samy miresaka teknika mahomby, samy miresaka momba neuromites sy teknika tsy mandaitra. Niditra an-tsokosoko ihany koa izahay ho fanaingoana hanamorana ny fianarana amin'ny fisian'ny aretina manokana (ohatra, dyslexia e tsy fahatsiarovana miasa).
Amin'ny antsipiriany bebe kokoa, miresaka iray famerenana avy amin'i Dunlosky sy ny mpiara-miasa aminy, efa nalahatra izahay a lisitry ny teknika 10 mandalo ny fandinihana ny fikarohana siantifika, ny sasany tena mandaitra ary ny sasany tsy dia ilaina loatra, mamaritra ny tanjany sy ny fahalemeny.
Androany dia te-hanavao ny lahateny natomboka teo aloha izahay ary handinika Teknika 6; ny sasany amin'ireny dia haverina ampitahaina amin'ny lahatsoratra teo aloha, ny sasany ho hitantsika voalohany. Ireo teknika rehetra ireo, araka ny fanadihadihana ireo literatiora hianteherantsika Weinstein sy ireo mpiara-miasa aminay, iray ny zavatra itovizany: mandaitra daholo.
Inona avy ireo teknika ireo?
Ao amin'ny cosa dia misy
Fanontaniana ny fanemorana ny dingana fandalinana ary, ambonin'izany rehetra izany, ny fandinihana fa tsy ny fifantohana amin'ny fotoam-pivoriana tokana (na fotoam-pivoriana akaiky vitsivitsy). Ny zavatra voamarika dia, mandritra ny fotoana laniana amin'ny famerenana, ireo olona izay manao ireo hetsika ireo mandritra ny fotoana fohy dia mianatra haingana kokoa, ary ny fampahalalana dia mijanona ho marim-pototra kokoa ho fahatsiarovana.
Ohatra amin'ny fampiharana azy io
Mety ilaina ny mamorona fotoana natokana hijerena ireo lohahevitra noresahina tao anatin'ny herinandro na volana lasa. Na izany aza, mety toa sarotra izany noho ny fotoana voafetra misy, miaraka amin'ny filana mandrakotra ny fandaharam-pianarana iray manontolo; na izany aza, ny elanelam-potoana fandinihana dia azo tratrarina tsy misy olana be loatra ho an'ny mpampianatra raha toa ka maka minitra vitsy any am-pianarana ny mpampianatra hamerina hijery ireo lesona tamin'ny lesona teo aloha.
Fomba iray hafa dia mety hisy amin'ny fanomezana ny mpianatra ny enta-mavesatra amin'ny fandaminana ny tenany amin'ny fanamarihana nozaraina rehefa mandeha ny fotoana. Mazava ho azy, ity dia mety indrindra amin'ny mpianatra ambaratonga avo kokoa (ohatra, amin'ny ambaratonga faharoa). Koa satria mila elanelana mialoha ny elanelam-potoana, tsy maintsy ilaina anefa ny fanampiana ny mpampianatra amin'ny mpianatra amin'ny fandinihana ny fianarany. Ohatra, ny mpampianatra dia mety hanome sosokevitra ny mpianatra amin'ny fandaharam-pianarana mandritra ny andro izay mifandimby amin'ireo izay ianarana foto-kevitra iray manokana ao an-dakilasy (ohatra, ny fandaharam-potoana famerenana fandaharana amin'ny talata sy alakamisy raha ampianarina any an-tsekoly izany. Alatsinainy sy alarobia) .
Ny fitsikerana voalohany dia mikasika ny mety ho fisavoritahana eo amin'ny elanelan'ny tsikera sy ny fanitarana tsotra ny fianarana; raha ny tena izy, ny teknika dia manome indrindra fa ny fizarana dia ahemotra rehefa mandeha ny fotoana. Na dia efa fantatra aza ny fiatraikany tsara amin'ny elanelan'ny dingana famerenana, tsy dia fantatra loatra ny vokatry ny fandinihana natao.
Ny fitsikerana faharoa dia ny mety tsy ahitan'ny mpianatra fahafaham-po amin'ny fampiharana zarazaraina satria heverina ho sarotra kokoa noho ny famerenana mifantoka amin'ny dingana fandalinana iray ihany. Io fomba fijery io, amin'ny lafiny iray, dia mifanentana amin'ny zava-misy satria, amin'ny lafiny iray, ny fanemorana ny fanamarihana arakaraka ny fandehan'ny fotoana dia mahatonga ny fitadiavana vaovao ho sarotra kokoa, ary etsy ankilany, ny fampiharana ny fandalinana lalina dia toa miasa (haingana kokoa), etsy ambony rehetra.amin'ny toe-javatra izay kendrena fotsiny ny fandalinana fanadinana. Na izany aza, ny mahasoa ny fampiharana zaraina dia tsy maintsy dinihina mandrakariva amin'ny toerana maha-zava-dehibe ny fitazomana ny fampahalalana ho fahatsiarovana lava.
Lafiny izay mbola mila hazavaina
Misy ny tsy fahampian'ny fikarohana izay mandinika ny vokatry ny fanalavirana ny fandalinana ny fampahalalana samihafa rehefa mandeha ny fotoana, manandrana mahatakatra raha toa ka mihatra amin'ity tranga ity ihany izay voalaza momba ny famerenana fotoana fohy.
Ankoatra ny mahasoa tsy azo lavina amin'ny fampiharana aparitaka dia tokony ho takatra raha ilaina na torohevitra ilaina koa ny dingana fampiharana lehibe iray.
Mbola tsy nohazavaina akory hoe inona no elanelam-potoana mety indrindra eo amin'ny dingana famerenana sy ny fahazoana vaovao mba hampitomboana ny fianarana.
2) FANAZAVANAINTERLEAVED '
Ity teknika ity dia misy ny famahana hevitra samy hafa na karazana olana milahatra, mifanohitra amin'ny fomba mahazatra kokoa amin'ny famahana ny kinovan'ny olana mitovy amin'ny fotoam-pianarana iray. Efa nosedraina imbetsaka tamin'ny fianarana hevitra matematika sy fizika.
Heverina fa ny tombotsoan'ity teknika ity dia mitoetra amin'ny famelana ny mpianatra hanana fahaizana misafidy ny fomba mety hamahana ireo karazana olana isan-karazany fa tsy ny mianatra ny fomba fotsiny fa tsy rehefa mampihatra azy.
Raha ny tena izy, ny fampiharana 'interleaved' dia nampiharina tamim-pahombiazana tamin'ny karazana atiny fianarana hafa, ohatra, teo amin'ny sehatry ny kanto dia namela ny mpianatra hianatra tsara kokoa hampifandray asa iray amin'ny mpanoratra marina azy.
Ohatra amin'ny fomba fampiharana azy
Azo ampiharina amin'ny fomba maro izy io. Ohatra iray dia ny fampifangaroana ireo olana misy eo amin'ny fikajiana ny habetsaky ny solida samihafa (fa tsy ny fanaovana fanazaran-tena maro mifandimby amin'ny karazana mivaingana mitovy).
Ny fikarohana dia nifantoka tamin'ny fifandimbiasana fanazaran-tena mifandraika, noho izany, ilaina ny mitandrina mba tsy hampifangaro ny atiny izay tsy mitovy amin'ny iray hafa (tsy ampy ny fandinihana momba an'io). Satria mora ho an'ny mpianatra tanora kokoa ny mampifangaro an'ity karazana fifandimbiasana tsy ilaina (ary angamba tsy mamokatra) ity miaraka amin'ny fifandimbiasam-baovao mifandraika kokoa, dia mety ho tsara kokoa ho an'ny mpampianatra tanora kokoa ny mamorona fotoana hanaovana 'fanabeazana mifampitohy'. 'Amin'ny enti-mody sy quizze.
Mijanona tsy mianatra vaovao vaovao intsony ve ny fiverenana amin'ireo lohahevitra teo aloha nandritra ny enim-bolana? Ahoana no ahafahan'ny fampahalalana taloha sy vaovao mifandimby? Ahoana no hamaritana ny fandanjana ny vaovao taloha sy vaovao?
3) FAMPIANARANA NY FITSABOANA / FANAMARIHANA
Izy io dia iray amin'ireo teknika mahomby indrindra ary mora ampiasaina ihany koa. Raha tsorina dia resaka fampatsiahivana izay efa nianarana, na tamin'ny alàlan'ny fizahana tena na tamin'ny fanamarinana ofisialy. Ny tena hetsika fampatsiahivana ny fampahalalana avy amin'ny fahatsiarovana dia manampy amin'ny fanamafisana ny fampahalalana. Ity fanao ity dia mandeha na dia ampahatsiahivina aza ny fampahalalana nefa tsy am-bava. Ny fahombiazana dia notsapaina tamin'ny fampitahana ny valiny tamin'ireo mpianatra izay, fa tsy nitadidy fampahalalana avy am-pahatsiarovana, dia namaky indray ny fampahalalana nianarana taloha (ny fampiharana ny famerenana amin'ny fahatsiarovan-tena dia nanjary ambony noho ny vokatra!).
Ny fomba fampiharana tsotra dia mety amin'ny fanasana ireo mpianatra hanoratra izay rehetra tadidiny momba ny lohahevitra iray nianarana manokana.
Fomba tsotra iray hafa ny fanomezana fanontaniana ho an'ny mpianatra hamaly aorian'ny nandalinany zavatra iray (na eo am-pandrosoana na amin'ny faran'ny dingana fandinihana) na manome sosokevitra hitadidy vaovao na hangataka azy ireo hamorona sarintany misy fotokevitra momba ilay lohahevitra. Mifototra amin'ny fampahalalana tadidiny.
Ny fahombiazan'ny teknika dia miankina ihany koa amin'ny fahombiazana amin'ny fiezahana haka vaovao avy amin'ny fahatsiarovana ary, miaraka amin'izay koa, ny lahasa dia tsy tokony ho tsotra loatra hiantohana io fahombiazana io. Raha ohatra, ny mpianatra manarona ny fampahalalana avy hatrany aorian'ny famakiana azy ary avy eo mamerina azy dia tsy fampahatsiahivana avy amin'ny fahatsiarovana maharitra izany fa fikojakojana tsotra amin'ny fitadidiana miasa. Mifanohitra amin'izay kosa, raha ambany dia ambany ny fahombiazana dia tsy azo inoana fa hanaporofoana fa mahasoa io fomba fanao io.
Ary koa, raha manana sarintany misy hevitra ianao hamoronana hampiorina ireo fahatsiarovana, zava-dehibe ny hanaovana izany amin'ny fo satria ny famoronana ireo sarintany amin'ny alàlan'ny fijerena fitaovam-pianarana dia voaporofo fa tsy dia nahomby tamin'ny fanamafisana ny fampahalalana.
Ary farany, zava-dehibe ny fiheverana ny fanahiana mety hateraky ny fampiasana fitsapana; nanasongadina tokoa fa ny tebiteby dia afaka mampihena ny tombony azo amin'ny fahatsiarovana an'ity teknika ity (tsy afaka manafoana tanteraka ny anton'ny tebiteby, ny marimaritra iraisana dia ny mametraka fanontaniana izay mety ho valiana amin'ilay mpianatra).
Mbola hazavaina ihany hoe inona ny haavon'ny fahasarotan'ireo fanontaniana fitsapana.
4) FAMPANDROSOANA (FANONTANIANA FANONTANIANA)
Ity teknika ity dia misy amin'ny fampifandraisana vaovao vaovao amin'ny fahalalana efa nisy. Misy fandikana maro momba ny fiasan'izy io; Indraindray isika dia miresaka momba ny fianarana lalindalina kokoa, fotoana hafa fandaminana indray ny fampahalalana ho fahatsiarovana.
Raha fintinina, izy io dia miaraka amin'ny mpianatra amin'ny alàlan'ny fametrahana fanontaniana momba ireo lohahevitra nianarana, miaraka amin'ny tanjona hitarika azy hanazava ny rohy lojika misy eo amin'ny vaovao nianarana.
Izany rehetra izany, ankoatry ny fankasitrahana ny fanaovana tsianjery ny foto-kevitra, dia mitaky fitomboan'ny fahafaha-manitatra izay nianarana tamin'ny toe-javatra hafa.
Ny fomba fampiharana voalohany dia mety amin'ny fanasana fotsiny ilay mpianatra handalina ny fandefasana ny fampahalalana dinihina amin'ny fametrahana fanontaniana aminy toy ny "ahoana?" sa maninona? ".
Ny fahafaha-manao iray hafa dia ny hampiasan'ny mpianatra an'ity teknika ity manokana, ohatra, amin'ny fitenenana mafy fotsiny hoe inona avy ireo dingana tokony hataon'izy ireo hamahana fampitoviana.
Rehefa mampiasa an'ity teknika ity dia zava-dehibe ny hanamarinan'ny mpianatra ny valinteniny amin'ny fitaovany na amin'ny mpampianatra; Rehefa ratsy ny atiny ateraky ny fangatahana fanodinana dia mety hanimba ny fahalalana izany.
Mety ho an'ny mpikaroka ny manandrana ny mety hampiharana an'ity teknika ity efa eo am-piandohan'ny famakiana ireo hevitra hianarana.
Mbola ho hita eo raha manararaotra ny fanontaniana nateraky ny tena ny mpianatra na ny tsara kokoa ho an'ny olona manaraka ny fanontaniana fanarahana (ohatra ny mpampianatra).
Tsy mazava ihany koa ny faharetan'ny mpianatra mitady valiny na hoe inona ny haavon'ny fahaiza-manao sy fahalalana azony mba hahazoany tombony amin'ity teknika ity.
Ny fisalasalana farany dia ny mahomby: ny fitantanana an'ity teknika ity dia mitaky fitomboan'ny fotoam-pianarana; tombony ampy ve izany sa mety kokoa ny miantehitra amin'ny teknika hafa, ohatra, ny fampiharana ny fanamarinana (tena)?
5) OHATRA CONCRETE
Ity teknika ity dia tsy mila fampidirana lehibe. Fanontaniana ny fampifangaroana ireo ohatra azo ampiharina amin'ny fanazavana teorika.
Ny fahombiazana dia tsy misy resaka ary mifototra amin'ny zava-misy fa ny hevitra tsy voahaja dia sarotra takarina noho ny hevitra mivaingana.
Tsy dia misy zavatra azo takarina momba an'io teknika io; tsy mahagaga raha ny mpanoratra ny fanadihadihana izay itondrantsika ity vaovao ity fantaro fa ity teknika ity no notanisaina indrindra tamin'ny boky fampiofanana ho an'ny mpampianatra (izany hoe amin'ny tranga manodidina ny 25%).
Na izany aza, mety manampy ny mahafantatra fa ny fahazoana ny mpianatra hanazava amin'ny fomba mavitrika ohatra hoe inona ny ohatra roa, ary ny famporisihana azy ireo hamoaka ny mombamomba azy ireo dia afaka manampy amin'ny ankapobeny.
Ankoatr'izay, ny fanomezana ohatra bebe kokoa momba izany dia toa mampitombo ny tombony amin'ity teknika ity.
Naseho fa ny fanazavana ny hevitra sy ny fanehoana ohatra tsy mifanaraka dia mazàna mianatra bebe kokoa momba ilay ohatra azo ampiharina (diso!). Ilaina araka izany ny mandinika tsara ireo karazana ohatra omena momba ny vaovao tiana hianarana; ireo ohatra dia tsy maintsy mifandraika tsara amin'ny atiny lehibe.
Ny mety hampiasana ohatra iray amin'ny fomba marina, izany hoe, hanesorana fotopampianarana ankapobeny tsy azo dikaina, dia mifandraika amin'ny ambaratongan'ny fifehezana ny lohahevitr'ilay mpianatra. Ireo mpianatra za-draharaha kokoa dia hirona amin'ny famitana mora kokoa ireo hevi-dehibe, ireo mpianatra tsy dia manana traikefa kokoa dia hijanona hijanona bebe kokoa eny ambonimbony.
Ny habetsaky ny ohatra tsara indrindra hanomezana tombony ny famolavolana ireo hevi-dehibe hianarana dia mbola tsy faritana.
Ary tsy mazava koa ny atao hoe mahay mandanjalanja eo amin'ny haavon'ny abstraction sy ny haavon'ny concreteness tokony hananana ohatra (raha tsy be loatra, dia sarotra loatra ny mahazo azy; raha mivaingana loatra, mety tsy dia ilaina loatra ny mampita ny foto-kevitra tianao hampianarina).
6) CODE DOBA
Impiry isika no nandre "ny sary mitentina teny arivo"? Io no fiheverana ifotoran'ity teknika ity. Amin'ny ankapobeny kokoa, ny teôria fanaovana kaody roa dia manome sosokevitra fa ny fanomezana fanehoana marobe mitovy amin'ny fampahalalana mitovy dia manatsara ny fianarana sy ny fitadidiana, ary ireo fampahalalana izay mamoaka mora kokoa ny fanehoana fanampiny (amin'ny alàlan'ny fizotran'ny sary mandeha ho azy) dia mahazo tombony mitovy amin'izany.
Ny ohatra tsotra indrindra dia ny fanomezana drafitra fahitana ny fampahalalana hianarana (toy ny fanehoana ny sela faritan'ny lahatsoratra). Ity teknika ity dia azo ampiharina amin'ny alalàn'ny mpianatra manao sary ny zavatra ianarany.
Satria ny sary dia tadidy kokoa amin'ny ankapobeny noho ny teny, zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny sary toy izany omena ny mpianatra dia ilaina sy mifandraika amin'ny atiny antenain'izy ireo hianarana.
Mila mitandrina rehefa mifidy sary eo anilan'ny lahatsoratra satria ny antsipirian'ny fahitana be loatra indraindray dia mety hanjary hanelingelina sy hanakana ny fianarana.
Zava-dehibe ny mazava fa tsy mifanaraka amin'ny teôria hoe "fomba fianarana" (izay hita fa diso) io teknika io; tsy olana ny famelana ny mpianatra hisafidy ny fomban'ny fianarana tiany (ohatra, ny maso o am-bava) fa ny fampitana ny fampahalalana mandalo fantsona marobe miaraka amin'izay (ohatra ny maso e am-bava, miaraka amin'izay).
Mbola betsaka ny zavatra tsy maintsy takarina momba ny fampiharana ny coding roa, ary mila fikarohana bebe kokoa hanazavana ny fomba hanararaotan'ny mpampianatra ny tombony azo avy amin'ny solontena maro sy ny fahambonian'ny sary.
Ao amin'ny tontolon'ny sekoly dia manana fotoana maro hampiasa ireo teknika vao nofaritana isika ary hampifangaro azy ireo amin'ny tsirairay. Ohatra, ny fampiharana zaraina dia mety ho matanjaka indrindra amin'ny fianarana rehefa atambatra amin'ny fampiharana ny fitsapana tena (retrieval fahatsiarovana). Ny tombony fanampiny amin'ny fampiharana zaraina dia azo raisina amin'ny alàlan'ny fitsapana tena hatrany hatrany, ohatra, amin'ny alàlan'ny fitsapana hamenoana ny banga eo anelanelan'ny fialan-tsasatra.
Mazava ho azy fa ny fizarana interleaved dia misy fizarana tsikera (fampiharana aparitaka) raha toa ka mifandimby fitaovana taloha sy vaovao ireo mpianatra. Ny ohatra simenitra dia mety ho am-bava sy amin'ny sary, ka mampihatra kaody roa koa. Ho fanampin'izany, ny paikady fanodinana, ny ohatra mivaingana ary ny kaody indroa dia miasa tsara indrindra rehefa ampiasaina ho ampahan'ny fanazaran-tena (fitsapana-tena).
Na izany aza, tsy mbola napetraka na ny tombony azo amin'ny fampifangaroana ireo paikadim-pianarana ireo dia manampy, mampitombo na, amin'ny tranga sasany, tsy mifanaraka. Ilaina noho izany ny fikarohana amin'ny ho avy mba hamaritana tsara kokoa ny paikady tsirairay (tena ilaina amin'ny fanodinana sy ny fikajiana indroa), hamantatra ireo fomba fanao tsara indrindra ho an'ny fampiharana any an-tsekoly, hanazava ny fepetra mifehy ny paikady tsirairay ary hiditra amin'ny fifandraisana misy eo amin'ireo enina. Paikady noresahintsika teto .
Dunlosky, J., Rawson, KA, Marsh, EJ, Nathan, MJ, & Willingham, DT (2013). Fanatsarana ny fianaran'ny mpianatra amin'ny teknika ianarana mahomby: Torolàlana manome fanantenana avy amin'ny psikolojia kognita sy fanabeazana. Siansa Psychologie amin'ny tombotsoam-bahoaka, 14(1), 4-58.
Weinstein, Y., Madan, CR, & Sumeracki, MA (2018). Mampianatra ny siansa amin'ny fianarana. Fikarohana kognitive: fitsipika sy vokany, 3(1), 1-17.
fianarana, ny fomba fanatsarana ny fianarana, teknika fianarana
Teknika hanatsarana ny fianarana: Iza no tena mandaitra? Fizarana 22021-08-252021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/tecniche-per-migliorare-lapprendimento.-quali-sono-davvero-efficaci.jpg200px200px